Slättenbacken | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Bona kwaye wenze » Imisebenzi » UToboggan uyabaleka » Slättenbacken
Ebumelwaneni "Slätten" kumbindi Hultsfred uya kufumana iSlättenbacken, induli encinci kwaye ilungile. Kukho indawo ye-barbecue kunye nokukhanyisa.
577 36 IHultfred, Sverige
ISlättebacken luthambeka olulungileyo ngokwenene kuyo yonke iminyaka. Induli inobude obufanelekileyo. Uyilo lwenduli lithetha ukuba kunokwenzeka ukuba uye ezantsi kuwo onke amacala, anciphisa ukuxinana kunye nomngcipheko wokukhwela komnye umntu. KwiSlättenbacken ngendawo yebarbecue kunye nebala lokudlala.
Induli yenqaba yamanzi
Zonke izixhobo zihamba